अब वामदेव गौतमको भविश्य के होला ? « Image Khabar
अब वामदेव गौतमको भविश्य के होला ?
Imagekhabar १९ भाद्र २०७८, शनिबार २०:५०
काठमाडौं, भदौ १९ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट दोस्रो पटक बहिर्गमनको पथमा हिँड्नुभएका निवर्तमान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भावी गन्तव्यलाई विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएका छन् । सैद्धान्तिक निष्ठाभन्दा खपतको राजनीतिमा माहिर मानिने गौतम राजीनामा पत्रमा समेत एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध खनिनुभएको छ ।
पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसंग असन्तुष्ट नेता गौतम एमालेमै सक्रिय रहने अड्कालबाजी बीच राजीनामा पत्र थमाएपछि उहाँको गन्तव्य कता भन्ने चासो सर्वत्र छ । एमालेको सैद्धान्तिक बाटो मानिने जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यागेर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा(एकीकृत समाजवादी)मा समेत गौतम खुल्नुभएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जबजले अबलम्बन गरेको संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई परिपालना नगरेको आक्षेप लगाएर मूलघरबाट बाहिरिनुभएका गौतमको अवस्था न घर, न घाट जस्तै छ । किन यस्तो अवस्था आयो त ?
महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघात भएको भन्दै २०५४ मा तत्कालिन एमाले चोइट्याएर माले बनाउनुभएका गौतम २०५६ सालको आमचुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरपछि २०५८ मा एमालेमै फर्किनुभयो । २०७४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताको सूत्रधारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका गौतम नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला चर्किएका दुई दल जोडन ‘ राष्ट्रिय एकता अभियान’ चलाउनुभयो । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनस्र्थापना गरिदिएपछि एमालेमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको द्वन्द्व कम गर्ने असफल प्रयास गर्नुभयो । त्यसपछिका दिनमा पनि उहाँको व्यवहारप्रति दुवै पक्ष आश्वस्त भएनन । अस्थिर राजनीतिक चरित्रकै कारण गौतमको भावी राजनीति धरापमा परेको बताउँछन् ।
एमालेबाट पहिलो पटक बाहिरिँदा गौतमको राजनीतिक यात्रा सुरक्षित देखिएपनि अहिलेको निर्णय महँगो पर्ने देखिन्छ । चुनाव हारेको पृष्ठभूमि, निष्ठाको राजनीतिमा आएको ह्रास, अविश्वसनीय छवि र उमेरका कारण पनि नेता गौतमका लागि प्रतिष्ठा आर्जन महँगो पर्नेछ ।